UXiaomi ubonise indlela eya kwi-Apple okanye i-Samsung ngomxube weXiaomi Mi | Iindaba zeGajethi
UXiaomi ubonise indlela eya kwi-Apple okanye kwi-Samsung ngomxube weXiaomi Mi
IiVillamandos | | Iiselfowuni
Iintsuku ezimbalwa okoko uXiaomi wasishiya nemilomo yethu ivulekile phantse konke ngentetho esemthethweni ye Xiaomi Mi Mix, i-smartphone enesikrini esikhulu se-6.4-intshi esihlala ngaphezulu kwe-90% ngaphambili Kwisixhobo. Kuyinyani ukuba kwimifanekiso yokwazisa isixhobo besibonakala ngathi asinaso isakhelo, kwaye wakuba ubonile ngokwenyani oku bekungenjalo, kwaye unokubona ezinye izakhelo ezincinci, kodwa kuyo yonke into kubonakala ngathi lixesha elizayo.
Andikabi nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ndinokuxubana ezandleni zam, kodwa njengani nonke sikwazile ukuzibona kwividiyo ezininzi ezivele kwiYouTube kwaye ndiqinisekile ukuba UXiaomi ubonise indlela eya kwi-Apple okanye kwi-Samsung ngomxube weXiaomi Mi.
Ukuba uyathandabuza okanye indawo entsha yeXiaomi ayikukholisi okwangoku, kuyakwanela ukuba uqhubeke nokufunda ukuze uqonde ukuba kungekudala siza kubona i-iPhone kunye ne-Samsung Galaxy ngaphandle kwesakhelo kwaye ikuphi isikrini ophambili.
1 Iscreen esingenazo naziphi na izakhelo ezihlala kuma-91.3% ngaphambili
2 I-Apple kunye ne-Samsung sele beyazi indlela
3 Ngaba siya kuze siyibone i-smartphone esine-100% ngaphambili?
4 Izimvo ngokukhululekileyo; Ndifuna iXiaomi Mi Mix nokuba yeyiphi indleko
Iscreen esingenazo naziphi na izakhelo ezihlala kuma-91.3% ngaphambili
Umhla u-Xiaomi wazisa ngokusesikweni i-Xiaomi Mi Mix, wagxininisa ngakumbi ukuba Iscreen se-6.4-intshi sihlala kwi-91.3% ngaphambili, enkosi kwiitekhnoloji ezahlukeneyo ezifakiweyo, umzekelo, ezikuvumela ukuba ugcine isithethi sangaphambili sifihliwe.
Umbuzo ngowokuba ingaba umenzi uya kuba nakho ukuthatha i-100% ngaphambili kunye nescreen, into ebonakala inzima ngenene, kwaye ngakumbi ukuba umntu uya kuba nakho ukushenxisa ngokupheleleyo izakhelo, ezithintela isikrini kwaye njengakwimeko yesiphelo esitsha esivela kumenzi waseTshayina sishiya phantse wonke umntu incasa ekrakra emilonyeni yabo.
IXiaomi ayisenguye nawuphi na umenzi kwintengiso yefowuni ephathekayo kwaye ngaphandle kokuba ikwazile ukuhlala kwi-91.3% yangaphambili kwaye kuye kwafuneka yongeze ezinye izakhelo ezincinci, ngokuqinisekileyo kungenxa yokuba okwangoku akukho nto inokwenziwa.
I-Apple kunye ne-Samsung sele beyazi indlela
Ukwamkelwa kweXiaomi Mi Mix kwimarike kungaphezulu kokulungileyo ngokweembono, kwaye ndiqinisekile ukuba kwakamsinya nje xa kuvulwa kwintengiso kwihlabathi liphela, impumelelo ibonakala iqinisekile. Isamsung kunye neApple ngokuqinisekileyo bayakuqaphela konke oku.
Ngokwamanye amarhe Sharp, umenzi wescreen seMi Mix, unokuba noxanduva lokwenza isikrini se-iPhone 8. Ukuya kuthi ga ngoku ngeSamsung, uninzi lwamajelo eendaba namhlanje abonisa ukuba sele izakusebenza ngamandla kwiscreen ngaphandle kwesakhelo kwaye iya kuhlala yonke ngaphambili.
UXiaomi ubonakala ngathi uyifumene ifomula yokubonelela abasebenzisi ngento ebabambisa kakhulu kwaye kwiinyanga nakwiminyaka ezayo ndiyoyika kakhulu ukuba siza kubona ukuba bonke abavelisi basebenza njani malunga noku, kukhuphiswano apho wonke umntu eya kufuna ukufikelela I-smartphone ngaphandle kwezakhelo kunye nescreen esihlala yonke indawo yangaphambili
Ngaba siya kuze siyibone i-smartphone esine-100% ngaphambili?
Umbuzo ophakamayo ngoku phantse kuthi sonke kukuba ingaba nawuphi na umenzi uya kuba nakho ukuphuhlisa kunye nokwenza i-smartphone apho isikrini sihlala kwi-100% ngaphambili. UXiaomi ulawule ngeMi Mix ukusinika isixhobo apho isikrini sihlala ngaphezulu kwe-90%, into ukuza kuthi ga ngoku akukho namnye umenzi osondeleyo kuyo, nangona uninzi bezamile ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Ngokuthobeka Ndicinga ukuba kusekho ixesha elide ngaphambi kokuba sibone i-terminal apho yonke ingaphambili ikhusi, ikakhulu kuba kuya kufuneka ukufumana indawo entsha yeKhaya iqhosha, kunzima ukuyisusa kwaye, umzekelo, i-LG izamile ukuyibeka ngasemva, ngaphandle kokukholisa abasebenzisi abaninzi. Nangona kunjalo, yonke into icebisa ukuba sisendleleni kwaye ngokukhawuleza njengoko uXiaomi enze ngoku, bonisa isimanga kwisiphelo sendlela apho lonke icala langaphambili lihlala khona kwiscreen.
Izimvo ngokukhululekileyo; Ndifuna iXiaomi Mi Mix nokuba yeyiphi indleko
Veki nganye sibona indlela isixhobo esitsha esiphathwayo esenza ngayo inkulumbuso kwintengiso, siphucula ukusebenza kwekhamera, isinika uyilo olungcono okanye isinike iprosesa engcono exhaswa yimemori ye-RAM esondela kumanani amabini. Kwiingcinga zam Ndicinga ukuba uXiaomi ukwazile ukubamba iqhosha kunye nabasebenzisi abaninzi Kwaye ke ubuncinci andiyifuni iprosesa ephezulu, okanye i-6 GB ye-RAM kwaye ndikhetha isikrini esihlala ngaphambili kwaye sibonelela ngamathuba amatsha.
Okwangoku ulindelo oluphakanyisiweyo lukhulu kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo amanani entengiso kwiinyanga ezimbalwa azakuthetha. Ukuba umenzi waseTshayina uthathe isigqibo sokuthatha itafile yokwenyani etafileni, ebonelela ngesiphelo sayo esineempawu ezinamandla kunye nekhamera yakhe ebalaseleyo, ndiqinisekile ukuba ngewayekwazile ukusondela kumanani entengiso ezinye zeefowuni ezibalaseleyo kwimarike.
Ndiyathemba ukuba isixhobo esilandelayo esiphathwayo esivela kuApple, Samsung okanye nayiphi na enye inkampani ifikelela kwimarike ngescreen esihlala ngaphezulu kwe-90% ngaphambili okanye kufutshane ne-100%. Ndiyoyika kakhulu ukuba owokuqala ukufezekisa ngewayephumelele ukufumana enye yeenjongo eziphambili kwimbali yentengiso yefowuni ephathekayo.
Ngaba ucinga njengam ukuba uXiaomi ubonise iApple okanye iSamsung indlela ngeXiaomi Mi Mix?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona. Sixelele kwakhona ukuba ungavuma ukuthenga iMi Mix, nangaliphi na ixabiso, okanye nasiphi na esinye isiphelo esinesikrini esihlala ngaphambili kwaye esiya kukhutshwa kwintengiso kwiinyanga ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » UXiaomi ubonise indlela eya kwi-Apple okanye kwi-Samsung ngomxube weXiaomi Mi
Ewe, kungekudala kudala ndifunda ukuba uXiaomi akakhange asebenzise i-euro kwi-R & D, kusengqiqweni ukuba ubona indlela abanayo, ubuncinci kwiifowuni eziphathwayo kunye neetafile, zonke zine-iPhone okanye i-Samsung yomoya yemodeli yangoku ngexesha ndibhengeziwe, kodwa kunjalo le mobile iyaphula ngokupheleleyo le meko kwaye ndiyathemba ukuba yenza ingxolo eyoneleyo ukufundisa i-Samsung kunye neApple isifundo esihle, nangona esi sesibini singazukuba nzima kakhulu, ubuncinci nge-iphone 7 yakho ebelunge kakhulu ulondolozo.
Kwimeko yam, ndikhetha izikrini ezincinci, kodwa yonke into yeyokuba iXiaomi Mi4 yam iyaphuka (andinathemba layo) kwaye noMxube uxakeke ngaphakathi hehe.
Uya kugqiba ukuba ube neMi Mix Alberto hehehe.
Lungisa ngaphezulu kwama-euro angama-900 aqala ukubhengeza
Akukho mntu wathi izakuba ngexabiso eliphantsi ... (i-euro ezingama-841 kwiivenkile ezininzi zaseTshayina).
Imibuliso I dare to comment on the mobile and I do it from LA, 1st Ndingathanda ukuyibona ngokwasemzimbeni emva koko ndiyizame, endicinga ukuba sisicwangciso esincinci esiphononongiweyo, sisaxhatshazwa, 2nd amaxabiso amanqaku umahluko, nangona kunjalo Ukuthatha isigqibo, kungcono ukuba ucinge ngako, 3rd Masibone ukuba icwangcisile na ukuphelelwa lixesha okanye ngaba sikhona isicwangciso malunga nayo. Ndiyabulisa kwaye ndiyathemba ukuba ndiza kufika e-LA kwicala lasePacific,
Uyakundixolela (njenge-Gijonian eyamkelekileyo) kodwa zininzi ii-mobiles ngaphandle kweqhosha lasekhaya elibonakalayo. Ukubona imimix kuphela kwengxaki iya kuba yikhamera yangaphambili.
Ewe, ngesiqhelo olu hlobo lweXiaomi lubiza kakhulu, ngokwento endiyibonileyo kwiYouTube, iselfowuni engenafreyimu ngexabiso eliphantsi kakhulu yi-doogee MIX, andazi ukuba ukhona umntu oyibonileyo kodwa ndayibona kwividiyo. Ndonwabile kuba iyifowuni yezoqoqosho ngaphandle kwezakhelo kwaye inezinto ezintle kakhulu kuba inomdla kakhulu ukuba ibiza imali engaphantsi kwama-200 eeuros njengoko uphawu lusitsho
Ngaphandle kwayo yonke into oovimba beMacBook Pro bakwirekhodi
I-CMRA, umtya wekhamera kwi-Apple Watch yakho